Caluula:-Cutubyo ka tirsan Ciidanka Badda Dawladda Puntland PMPF ayaa shalay gaaray xeebta degmada Caluula ee Gobolka Gardafu oo maalin ka hor ay koox dhalin yaro ah oo hubaysan ay ku qafaasheen Markabka ARIS-13 ku sugnaa biyaha badda Degmada Caluula.
Agaasimaha Ciidanka Badda Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Xaji Xassan oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in ay dowladda Puntland ay ciidamo u dirtay xeebta degmada Caluula ayna ciidanka badda dowladda Puntland PMPF ay hadda dul fadhiyaan Markabka ay qafaasheen dablay hubaysan isagoo u jeediyey dablayda in Markabka ay ku sii daayaan si nabad gelyo ah haddii kale ay ciidanku qaadi doonaan talaabo ciidan.
Warar saaka soo baxaya ayaa sheegay in Ciidanka Badda Dawladda Puntland PMPF uu iska horimaad dhexmaray dablayda hubaysan ee haysta Markabka ARIS-13 uuna jiro khasaaro soo kala gaaray walow ay odayaashu dhaqanka degmada Caluula ay wadaan waan waan ay ku doonayaan in si nabad gelyo ah lagu sii daayo Markabka ARIS-13.
Dhinac kale Gudoomiyaha Degmada Caluulla oo wax lga wiidiiyey iska horimaadka dhacay ayaa xaqiijiyey waxaana uu sheegay in koox wadata saxiimado oo doonayey in ay u gurmadaan dablayda hubaysan ee haysata Markabka ARIS-13 ay iska horimaad hubasyan uu dhexmaray ciidanka Badda Puntland PMPF oo iyagu go’doomiyey dablayda haysta Markabka ARIS-13.
Hoos ka Dhagayso Agaasimaha Ciidanka Badda Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji Xasan.